Izipho ezi-18 eziPhambili zeZodiac zaBafundi beNkwenkwezi-Izipho ezisekwe kwi-Horoscope - Iiholide + Imibhiyozo
Izipho ezi-18 eziPhambili zeZodiac zaBafundi beNkwenkwezi-Izipho ezisekwe kwi-Horoscope
AbaThengi be-Etsy / Urban
I-Monograms kunye namatye okuzalwa ayindlela elungileyo yokwenza izipho zabathandekayo bakho, kodwa kukho enye into eyonwabisayo-kwaye ihlala ilungile kwaye inesitayile-indlela yokwenza izinto: ngokumela uphawu lwazo lwe-zodiac. Sonke sinomhlobo omnye ubuncinci othanda ukufundwa kweenkwenkwezi, nokuba bahlala bejonga i-horoscope yabo okanye bafunda iitshathi zokuzalwa zabantu, ke bafumane isipho abaya kuthi bajonge ngamehlo abo.
Ukusuka kubucwebecwecwe kunye namakhandlela ukuphosa iipilo kunye neencwadi zokupheka (kunye nesiqholo esiphefumlelwe ngomqondiso weenkwenkwezi!), Ezi zezinye zezona ziphiwo zengqondo ezinokubonelelwa kulo nyaka. Ayinamsebenzi nokuba uyiVirgo okanye iTaurus- kukho isipho kuwo wonke umntu olapha.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 Imephu yeNkwenkwezi yesiqhelo kwiocala etsy.com$ 16.15 THENGA NGOKU
Fumana imephu yenkwenkwezi yesiko eyenziwe ngexesha labo lokuzalwa kunye nolwazi lwendawo-esi sisipho esicingisisa ngakumbi sokongeza kraca kusapho, kodwa sisebenzela ngaphezu kwabantwana abancinci, kwaye unokubenzela imicimbi ekhethekileyo ( njengemitshato).
Mbini Ikhandlela leZodiac Igama loqhagamshelwano Arabella etsy.com$ 32.99 THENGA NGOKU
Awungekhe uhambe gwenxa ngekhandlela, kwaye la makhandlela e-zodiac enziwe ngeoyile efanelekileyo kunye neekristali ukuze zihambelane nomqondiso ngamnye weenkwenkwezi.
3 Umqala weDelly Zodiac Constellation ElegantSwan etsy.com$ 27.75 THENGA NGOKU
Bayeke bajonge iinkwenkwezi kulo mqala womqala kunye namatye ukumela iqela labo lomqondiso.
4 Ukuprinta kweZodiac yangaphakathi yoBugcisa iintaka etsy.com$ 20.00 THENGA NGOKU
Olu phawu lobugcisa lubonisa uphawu ngalunye njengowasetyhini ekhayeni lakhe, ejikelezwe zizo zonke izinto azithandayo.
5 Itshathi yeVili yeChart yaseCrystial TheOracleHaven etsy.com$ 19.99 THENGA NGOKU
Yeyona imagi ifanelekileyo yokusela ikofu yabo yakusasa ngelixa befunda i-horoscope yabo yosuku.
6 Zodiac Constellation Disc namajikazi sifiso etsy.com$ 59.00 THENGA NGOKU
Amacici esiliva aqaqambileyo yindlela efanelekileyo yokubonisa uphawu lwazo lwe-zodiac ngendlela elula, efihlakeleyo.
7 IMixologyology yeAstrology amazon.com $ 15.99$ 13.92 (13% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ngomhlobo wakho ojonge ngeenkwenkwezi oxabisa i-cocktail elungileyo, le ncwadi yokupheka yeziphuzo kuyo yonke impawu ye-zodiac isisipho esifanelekileyo.
8 IBhodi yokusika itshathi yeVodi Zodiac kunye neAstrology Ulwandle olunombono eyoku.com$ 21.60 THENGA NGOKU
Ibhodi yokusika enesakhiwo seetshathi yeenkwenkwezi yeediliya phantse intle kakhulu ukuba ungayisebenzisa, kodwa lulongezo olufanelekileyo ekhitshini labo.
9 Iicufflinks zesikwere seKhonkco RocketboyIzipho etsy.com$ 28.99 THENGA NGOKU
Ezi zikhonkxi zomthi zikrolwe iinkwenkwezi ezahlukeneyo, ngoko banokunxiba umqondiso wabo kwimikhono yabo-ngokoqobo.
10 Zodiac Constellation Cuff uncommongoods.com$ 79.00 THENGA NGOKU
Olunye ukhetho lobucwebe? Le cuff intekenteke ikrolwe iinkwenkwezi zekroza labo lomqondiso.
Shumi elinanye I-Mirror ye-Zodiac eyiCompact Mirror Ibhombu etsy.com$ 34.99 THENGA NGOKU
Esi sipili senziwe sithandwa nguwe lukhetho oluhle abaya kuhamba nalo yonke imihla-bayikrobe ngeempawu ezintle zomqondiso wabo, okanye bacele umyalezo wesiko ukuba uwenze ube ngowakho.
12 Amakhonkco eZodiac eluncedo.nl$ 19.97 THENGA NGOKU
Iringi enesitayile iya kubanceda babonise uphawu lwabo kancinci ngakumbi, kwaye luyahlengahlengiswa ukuze lulingane nobukhulu obukhulu.
13 Incwadi yakho yokupheka ngeenkwenkwezi: Iresiphi egqibeleleyo yalo lonke uphawu amazon.com $ 18.99$ 16.59 (13% icinyiwe) THENGA NGOKU
Umqondiso wabo uya kubakhokelela kwirisiphi entsha egqibeleleyo yeqela labo lesidlo sangokuhlwa, enkosi kule ncwadi yokupheka.
14 Iseti yeZiphoac yeziqholo IZodica Perfumery qvc.com$ 35.00 THENGA NGOKU
Amafutha asekwe kuphawu lwawo anokuba nje livumba elitsha lomsayino. Iphunga eliphefumlelweyo le-Aries, umzekelo, linamanqaku esinamoni, i-blackberry, intyatyambo yecuba, kunye nokunye.
Shumi elinantlanu I-Zodiac Constellation Glassware Setha ibalulekile etsy.com$ 96.00 THENGA NGOKU
Oku kuseta okuhle kweglasi kuza neziqwenga ezili-12, inye kumqondiso ngamnye we-zodiac.
16 Zodiac oyimfakamfele Silk wamehlo Slip nguyngoku.com$ 50.00 THENGA NGOKU
Sonke sifuna ubuthongo bethu bobuhle, kwaye ezi maski zine-zodiac-themed zenza ukuba kube lula kakhulu ukuzifumana. Zenziwe ngesilika emsulwa ngaphakathi nangaphandle, kuqinisekisa ukozela okukozolisayo.
17 UMichael Aram Ibhokisi yeZodiac nguyngoku.com$ 100.00 THENGA NGOKU
Baza kugxotha iitrinkethi kunye nezacholo kule bhokisi imangalisayo kaMichael Aram ebonisa uphawu lomqondiso.
caphula malunga nekhaya kunye nosapho
18 IHolli Zollinger Yokwala I-Pillow Yokwala Zodiac dengcangcang.com$ 39.00 THENGA NGOKU
Olu phawu lomzobo wokuphosa imiqamelo lukhetho olumnandi, olunesitayile. Ungaphuma uphume uze ufumane ezintathu-uyazi, ukumela uphawu lwelanga, uphawu lwenyanga, kunye nophawu oluphumayo.
ipeyinti yangaphakathi engenatyhefu
ziikristale kunye namatye iintsingiselo
izipho zekrisimesi ezilungileyo zasekhaya
Indlu entsha ka-vanessa bryant
imibala emitsha ka-2016